२ हात जोड्दै कुमार राईलाइ किन भेट्न आइन यी युवती ? कुमार राइले गरे सबै संग यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
Sisir Budhathoki November 1, 2020
सहयोगी दाताहरुले खाना खाएर दिएको पैसा कुमार राइले दुवै मिर्गौला फेल भएर उपचार गर्दै गर्नु हुने बिरामीलाई काठमाडौँ पठाईदिनु भएको छ । हाल केहि कारणले गर्दा यो काम रोकिए पनि कुमार राइ समाज सेवाको काममा सक्रिय भएर लागेका छन् । कोरना भाइरसका कारण नेपालमा अहिले दिनरात मेहेनत गरेर खाने नेपालीलाई अठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। कुमार राइलाइ २ हात जोड्दै क्रिस्टिना छेत्री नाम गरेकी युवती किन मिडियामा आइन ? तल भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोला ।